Ngokwezifiso - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Wonke Umuntu Unempahla Yangaphansi Eklanyelwe
"Wonke umuntu unezingubo zangaphansi eziklanyelwe" ukuze ubone ukuthi wonke umuntu wesifazane ufanelwe yizingubo zakhe zangaphansi ezihlukile. Lena indlela yokubonisa abesifazane abagcwele amandla, abahehayo, nababukekayo.
I-Xinzi Rain igxile ekwakhiweni kwebha yabesifazane kanye nesethi yezingubo zangaphansi iminyaka, lapha sihlinzeka: ubhodisi wabesifazane abakhuluphele: kanye nobhodisi, ubhodisi ophusha phezulu, ubhodisi wezemidlalo, ingubo yangaphansi e-sexy, ingubo yokubhukuda, ubhodisi ongenamthungo, noma yibaphi obhodisi abanethezekile namaphenti angenziwa lapha.Here ungakwazi futhi Custom abesifazane bras okukhulunywe ngakhonjengenhla.
I-OEM/ODM, isampula yamahhala, ukulethwa okusheshayo, ukusiza amakhasimende ukuthi anikeze indawo eyodwa "Fashion Wearing", zama ukuhlangabezana nazo zonke izimfuno zekhasimende, futhi sikhule ndawonye namakhasimende ethu.
Dizayina Futhi Yenza
Push up bras ,Plus size bras ,sports bras ,Seamless bras ,sexy lingeries pls khululeka usithumelele iE-mail shiya umlayezo faka inombolo kawhatsapp noma usishayele wamukelekile kakhulu!
Izinto ezihlukahlukene zokukhetha
Noma yimuphi umdwebo wemiklamo ungaphila
Isebenza kanjani?Iyini inqubo?
Isebenza kanjani?Iyini inqubo?Amanye amakhasimende ethu azobuza lo mbuzo.Njengomkhiqizi wezingubo zangaphansi ochwepheshe, lo mbuzo ulula kakhulu, ngoba sidinga kuphela ukuthi unikeze okusalungiswa kwakho kokuklama noma izithombe, futhi ochwepheshe bethu bangaqedela ukukhiqizwa kwesampula ngokuvumelana nezidingo zakho.Ngemva kokuqinisekisa kwakho, singakwazi ukwenza ukukhiqiza ngobuningi.